बिरालाहरूमा अचानक मृत्युको कारण के हो? | Noti बिरालाहरू
बिरालाहरूमा अचानक मृत्युको कारणहरू
हामी सबै जो हाम्रो भुँडीलाई प्रेम गर्छौं तिनीहरू अझ राम्ररी बाँच्न चाहन्छन्। समस्या तब देखा पर्दछ जब हामी आफैं बिरामी छौं भनेर बुझेका छैनौं, वा हामी आफैलाई विश्वस्त गर्दछौं कि केही दिन पछि तिनीहरू आफैं निको हुनेछन्। त्यो जब रोगको प्रगति हुन्छ र कहिलेकाँही यति नराम्रो हुन्छ कि जब हामी उनीहरूलाई पशु चिकित्सकमा लग्छौं प्रायः ढिलो हुन्छ।
तर यसको लागि हामीले थप्नु पर्छ यी पशुहरू विशेषज्ञ हुन् जब यो लुक्ने दर्दको कुरा आउँछ। त्यसो भए, हामी कसरी बिरालोहरूमा अचानक मृत्युबाट बच्न सक्छौं?
1 अचानक मृत्यु भनेको के हो?
2 के कारणहरू छन्?
3 यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ?
4 बिरालाहरूमा अचानक मृत्युको सression्कुचन
5 रेखा रेखा जीवन प्रत्याशा बनाम। अचानक मृत्युको जोखिम
अचानक मृत्यु भनेको के हो?
नामले सबै भन्छ: कुनै जनावरको अचानक मृत्यु हो (यो मानव, कुकुर, बिरालाको भए पनि ...)। बिरामीको मामलामा, आफ्नै बाँच्ने वृत्तिबाट यो यति विकसित भएको छ कि यो पीडा कसरी लुकाउने राम्रोसँग जान्दछ; वास्तवमा, यसले केवल कमजोरीका संकेतहरू देखाउँदछ यदि तपाईं आफ्नो मानवसँग धेरै विश्वस्त हुनुहुन्छ र यदि तपाईं शान्त र रमाइलो वातावरणमा बस्नुहुन्छ भने।
त्यसकारण, यो हामी महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले घरमा रहेको फ्युरमा ध्यान दिएर हेरौं, किनकि कुनै पनि लक्षण, यसको तालिकामा भएको सानो परिवर्तन पनि बिरामीको लक्षण हुन सक्छ।
अब हामी तपाईलाई बिरालोहरुमा अचानक मृत्यु हुनुको कारण के हो बताउन जाँदैछौं। बिरालोहरूमा बिरामी र मृत्युलाई विचार गर्दा एउटा कुरा याद राख्नु महत्त्वपूर्ण छ कि बिरालोहरू आफ्नो बिरामीलाई बाँच्नको उपायको रूपमा लुकाउन एकदम राम्रो हुन्छन्, बिरामीहरूले कसैलाई बिरामी हुनु अघि लामो समयसम्म बिरामी हुने अनुमति दिन्छ।
यो विशेष गरी उनीहरूको लागि सही हुन सक्छ जसले आफ्नो बिरालाको साथ प्रत्येक दिन खर्च गर्दछन् र सूक्ष्म परिवर्तनहरू याद गर्दैनन् जस्तै वजन घटाउने, कपाल झर्ने, बढी निद्रा, वा सुस्त कोट। हाम्रो बिरालाहरु को उमेर को रूप मा, हामी विश्वास गर्न सक्छौं कि वजन कम गर्न, कम गतिविधि, र / वा सुस्ती जस्ता लक्षणहरू बिरामीको सट्टा उमेर संग कम गर्न को लागी हो।
बिरालाहरूमा अचानक मृत्युको कारणहरू:
ट्रुमा। यो बाहिरी बिरालाहरूमा अधिक सामान्य छ, तर कुनै पनि जनावरलाई हुन सक्छ। आघातको उदाहरणमा गाडीले हिर्काउनु, कुकुर वा अन्य जनावरहरूबाट आक्रमण गर्नु वा काट्नु, बन्दुकको चोटहरू, झर्ने कामहरू, वा अनियमित आघातजस्ता दुर्घटनाहरू समावेश छन्।
विषाक्त पदार्थ। इनजेसन र / वा विषाक्त पदार्थ र औषधिहरूको जोखिम बाहिरी बिरालाहरूमा बढी सामान्य हुन्छ, तर इनडोर बिरालोहरूमा पनि हुन सक्छ। साधारण विषालु पदार्थहरूमा एन्टिफ्रिज, प्लान्टको विषाक्तता, मुसा विषको इन्जेसनलगायत अन्यहरू समावेश छन्।
मुटु रोग। हृदय रोग थोरै वा कुनै चेतावनी संकेतहरूको साथ आउन सक्छ। जबकि केही बिरालाहरूको मुटुको बडबडको इतिहास हुन सक्छ, अन्य बिरालाहरूको असामान्य लक्षण वा समस्याहरूको इतिहास हुन सक्दैन। केही बिरालाहरूले सूक्ष्म लक्षणहरू देखाउँदछ, जस्तै कम खेल्दा, बढि निदाउने, भूख घटाउनु, तौल घटाउनु, वा सास फेर्ने दर। बिरालाहरू पूर्ण स्वास्थ्यमा रहनु धेरै सामान्य छ, केवल बिमारीको लक्षणहरू देखाउन चाँडो र गम्भीर अवस्थामा। हृदय रोग भएका बिरालाहरूले सास फेर्न वा आफ्ना पछाडिको खुट्टा प्रयोग गर्नमा कठिनाई विकास गर्न सक्छन्, जसले उनीहरूलाई पीडामा रुवाउन सक्छ। केही बिराला मालिकहरूले लक्षणहरूको कुनै सication्केत बिना नै तिनीहरूको बिरालो मरेको फेला पार्नेछन्। बिरालाहरूको सबैभन्दा सामान्य हृदय रोग हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी (HCM) (माथि छलफल गरिएको जस्तो) हो।
मुटुको असफलता। जब मुटुको असफलता हुन्छ, यसको मतलब यो हो कि मुटुले अब शरीरको सामान्य मागहरू र कार्यहरू पूरा गर्न सक्दैन। यसले सामान्यतया फोक्सोमा तरल पदार्थको निर्माण कार्य गर्दछ जसले पल्मोनरी इडेमा भनेर चिनिन्छ। मुटुको असफलताको सबैभन्दा सामान्य अन्तर्निहित कारण हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हो। मुटुको विफलताका लक्षणहरूमा अक्सर भोकको सूक्ष्म कमी, सामान्य गतिविधिहरूमा भाग लिने कमी र सास फेर्ने दर समावेश हुन्छ। केही बिरालाहरूले यति नराम्ररी सास लिनेछ कि तिनीहरू मुख खोलेर हाँसिरहेका देखिन्छन्, र बिरालाहरूले उनीहरूका लक्षणहरूलाई ध्यानपूर्वक मास्क गर्दछ जबसम्म तिनीहरू पूर्णतया र जीवनलाई जोखिममा पार्ने हृदय विफलताको स्थितिमा हुँदैनन्।
मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन। "हार्ट अट्याक" भन्ने शब्द प्रायः कोयोनरी धमनी रोगको कारण हुने मायोकार्डियल इन्फेक्शन (MI) पीडित व्यक्तिहरूमा लागू हुन्छ। मायोकार्डियम मुटुको मांसपेशी ऊतक हो जसले कोरोनरी धमनीहरूबाट पोषक र अक्सिजन प्राप्त गर्दछ। कोरोनरी धमनी मुटुको मांसपेशीमा साना रक्तवाहिनाहरू हुन्छन् जसले एओर्टाबाट रगत बोक्दछन् जुन शरीरको मुख्य धमनी हो। जब मांसपेशीहरूले सामान्य रक्त आपूर्ति प्राप्त गर्दैन, हृदयघात हुन्छ।
रगत कोट। रगतको थक्का जसलाई थ्रोम्बोइम्बोलिज्म पनि भनिन्छ, बिरालामा मुटु रोग लगायतका बिभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूको कारण हुन सक्छ। रगतका थोकहरू पछाडिको खुट्टामा मस्तिष्क, फोक्सो, वा रक्त वाहिनाहरूमा जान सक्छन्, ती बिरालाहरूमा अचानक मृत्यु हुन्छ।
दीर्घकालीन किडनी रोग। बिरालोमा क्रॉनिक किडनी असफलता (CKD) एक धेरै साधारण समस्या हो। जब मृगौला असफल हुन्छ, तिनीहरूले अब फोहोर उत्पादनहरू हटाउन सक्दैनन् जसले रगतमा विषाक्त पदार्थहरू जम्मा गर्न निम्त्याउँछन्। यसले किडनी रोगको क्लिनिकल लक्षणहरू उत्पादन गर्दछ जसमा वजन घटाउन, भूख घटाउनु, बान्ता, र सुस्तता गुर्दा रोग बढ्दै जाँदा। किडनी रोगका साथ केहि बिरालाहरूले पनि तिर्खा र पेशाब बढाएका छन्। पुराना बिरालाहरूमा यो अधिक सामान्य छ, तर यो कुनै पनि उमेरमा हुन सक्छ।
बिरामी पेशाब अवरोध। बिरुवाको मूत्र अवरोध मूत्र पथको एक गंभीर अवरोध हो, र यद्यपि यो रोगले कुनै बिरालालाई असर गर्न सक्दछ, यो प्राय जसो पुरुषहरूमा पाइन्छ। विशिष्ट संकेतहरू पेशाब गर्दै र रुँदै छन्। जब उपचार नगरिएमा, धेरै जसो बिरालाहरू hours२ घण्टा भित्र मर्दछन्।
बिरालाहरुमा स्ट्रोक। "स्ट्रोक" एक शब्द सामान्यतया मानिसहरूलाई प्रयोग गरिन्छ जसलाई सेरेब्र्रोवास्कुलर दुर्घटना (CVA) सेरेब्र्रोवास्कुलर रोगको कारण भएको छ। मस्तिष्कमा रगत आपूर्तिको अवरोधका कारण स्ट्रोक हुन्छ, जुन मस्तिष्कबाट शरीरको बाँकी भागमा सार्ने स्नायु आवेगहरूको असफलतालाई झल्काउँछ। लक्षणहरू छिटो देखा पर्न सक्छ र अचानक बिरालाको मृत्युको कारण हुन सक्छ। स्ट्रोकको स्केतमा हिंड्न कठिनाई, कमजोरी, एक तर्फ झर्ने, शरीरको एक पक्षमा पक्षाघात, र / वा दौरा पर्दछ।
संक्रमणगम्भीर संक्रमण, जसलाई सामान्यतया सेप्सिस भनिन्छ, यसले सुस्तता, एनोरेक्सिया, वजन घटाउने, डिहाइड्रेशन, ज्वरो, र बिरालाहरूमा अचानक मृत्यु जस्ता लक्षणहरूको प्रगतिशील समूह निम्त्याउँछ।
सदमे। शकलाई जीवन धम्की दिने सिन्ड्रोमको रूपमा परिभाषित गरिएको छ जसले कम रक्तचाप निम्त्याउँछ र मृत्युमा पुग्न सक्छ। यो एलर्जी प्रतिक्रिया, मुटुको क्षति, गम्भीर संक्रमण (सेप्सिस), आघात, रगत क्षति, toxins, तरल पदार्थको ह्रास, र मेरुदण्ड आघातको कारण हुन सक्छ। चकित बिरालाहरू चाँडै मर्दछन्, जुन अचानक मृत्युको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।
बिरालाहरुमा उच्च रगत चिनी। अनियन्त्रित मधुमेहका कारण गम्भीर लक्षणहरूले कमजोरी, सुस्ती, बान्ता, कोमा, र मृत्यु निम्त्याउन सक्छ।
रगत चिनी ड्रप। कम रगत चिनी, hypoglycemia को रूप मा पनि चिनिन्छ, सुस्ती, कमजोरी, दौरा, र अचानक मृत्यु को कारण हुन सक्छ। यो मधुमेह, आघात, र / वा विभिन्न संक्रामक रोगहरूको खराब नतिजा हुन सक्छ।
हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी- मुटु गाढो र कडा भयो, यसले रगत पम्प गर्नको लागि सामान्य रूपमा। लक्षणहरू हुन्: सास फेर्न समस्या, हृदयको असामान्य ताल, बान्ता, र भोक कम हुनु।
हार्टवर्म (फिलारियासिस): यो परजीवी रोग हो जसले मुटुलाई असर गर्छ। बिराला बिरालाहरुमा खोकी, बान्ता, मुटुको असफलता, र वजन घटाउनु छ।
बिरूवा इम्युनोडेफिशियन्सी भाइरस: को रूप मा पनि चिनिन्छ बिरुद्द एड्सयो एक भाइरल रोग हो जसले अरूलाई पखाला पखाला, अस्वस्थता, भूख र वजन घटाउन, gingivitis, पैदा गर्न सक्छ; यद्यपि बिरालाले प्राय जसो रोग अत्यन्त उन्नत नभएसम्म लक्षण देखाउँदैन।
बिरामी संक्रामक पेरिटोनिटिस (FIP): यो बिरालाहरु मध्ये एक हो जसले बिरालाहरुमा अत्यधिक मृत्यु गराउँछ। यसले डिहाइड्रेशन, भूख र वजन घटाउन, आँखा डिस्चार्ज र असुविधाको कारण गर्दछ।
यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ?
खैर तपाइँ के जान्नु पर्छ कि छ बिरालाहरूमा अचानक मृत्युबाट बच्नको लागि मात्र उपाय तिनीहरू स्वस्थ छन् भनेर निश्चित गर्नु हो। तिनीहरूलाई उच्च गुणस्तरको खाना खुवाउनु पर्छ (अनाज वा उत्पादन बिना), र यो पनि महत्त्वपूर्ण छ किaantiparasitic उपचार ताकि तिनीहरू दुबै बाह्य र आन्तरिक परजीवीहरू बिरूद्ध सुरक्षित छन्। त्यहाँ antiparasitic कलर छन् कि तपाइँ यस खण्ड मा मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
थप रूपमा, हामीले उनीहरूलाई पशु चिकित्सकमा लैजानु पर्छ हामीले उनीहरूलाई केहि भयो भनेर शंका गर्थ्यो, तर उनीहरूलाई खोप लगाउनु पर्छ, र गर्मी हुनु अघि उनीहरूलाई कास्ट्रेट गर्नुपर्दछ।
बिरालाहरूमा अचानक मृत्युको सression्कुचन
घरपालुवा जनावरले अनुभव गर्न सक्ने एउटा खराब चीज भनेको तपाईंको प्रिय बिरालोको अचानक हराउनु हो। अचानक बिरालाको मृत्युलाई बुझ्ने प्रयास अत्यन्तै पीडादायी छ। तपाईं के भयो भनेर बुझ्न चाहानुहुन्छ, तपाईं फरक तरिकाले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो विचार गर्नुहोस्, र निर्धारण गर्नुहोस् कि त्यहाँ स्वास्थ्य समस्याहरू छन् जुन तपाईंले महसुस गर्नुभएन। अचानक बिरालोको मृत्युलाई बुझ्न यो कठिन हुन्छ जब यो कुनै युवा जनावरलाई हुन्छ.
रेखा रेखा जीवन प्रत्याशा बनाम। अचानक मृत्युको जोखिम
बिरालाहरूको आयु अपेक्षित १ to देखि २२ वर्ष हुन सक्छ। जीवनको प्रत्याशामा ठिक फरक छ बिरालोको व्यक्तिगत जीवनशैलीमा निर्भर रहँदै। जीवन प्रत्याशा बिरालो घर भित्र, घर भित्र र बाहिर, वा बाहिर मात्र हो कि होइन भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ।
इनडोर-मात्र बिरालाहरूसँग सब भन्दा लामो आयु हुन्छ, त्यसपछि इनडोर र आउटडोर बिरालाहरू हुन्छन्। बिरालाहरू जुन बाहिर घरमै बस्दछन् छोटो आयु हुन्छ, विषाक्त पदार्थ, आघात, पशुको आक्रमण, र संक्रामक रोगहरूका कारण। जबकि यो प्रवृत्ति सामान्यीकरण हो, त्यहाँ राम्रो जीनका साथ बाहिरी-मात्र बिरालाहरू छन् जसले पौष्टिक आहार र पशुचिकित्सा प्राप्त गर्दछ जुन धेरै लामो आयु हुन्छ।
जहाँसम्म यो विशेष गरी कलिलो उमेरमा प्रिय बिरालोको हराएको कुरा बुझ्न गाह्रो छ। बिरालाहरूमा अचानक मृत्यु पनि आउन सक्छ, जुन यति विध्वंसकारी हुन सक्छ र यसले केही पनि अर्थ राख्दैन। यस अवस्थाबाट तपाईले लिन सक्ने एकमात्र सान्त्वना भनेको यो हो कि तपाईंले आफूले गर्न सक्ने सब भन्दा राम्रो काम गर्नुभयो र तपाईंले आफ्नो बिरालालाई अद्भुत जीवन दिनुभयो।
लेखको पूर्ण मार्ग: Noti बिरालाहरू » बिरालाहरू » जिज्ञासा » बिरालाहरूमा अचानक मृत्युको कारणहरू
मेरो बिरालामा यी कुनै लक्षणहरू थिएनन् र days दिन अघि पूर्ण रूपले स्वस्थ भएर मर्नु परेको बिल्कुल कुनै लक्षणहरू थिएन जुन उसलाई केही हुने थिएन
एक दिन अघि, उनी सामान्य थिइन, उनी जहिले पनि मलाई सताउन आउँछिन्, उनी सामान्य रूपमा खाइन्, आदि ...
जुन दिन उनी बित्नुभयो म उठेको थिएँ मैले तिनीहरूलाई जस्तो हरेक दिन भिजेको खाना हालेका थिए र उनी एक्ली थिइनन्, अर्को व्यक्तिले खाना तयार गर्नलाई उनीहरूलाई पर्खिरहेको थियो, जुन सामान्यबाट बाहिर थियो किनकि उनी पहिलो थिइनन् र उसले यो पनि पनी निश्चित गर्नुपर्दछ कि उसले अर्को खाना खानेछैन, तसर्थ जब उसको अन्त्य हुन्छ उसले अरूको खाना खान कोशिश गरेको खण्डमा त्यसलाई त्यत्तिकै छोड्नुपर्‍यो, ऊ त्यहाँ थिएनन् भनेर मात्र मैले अन्तर्ज्ञान पाएँ। उसलाई केहि गम्भीर कुरा भयो किनभने उनी सामान्य छैनन् कि उनी आईनन्, मैले उनलाई बोलाए, मैले उनलाई खोजें र ओछ्यानको माथिल्लो भागमा भेट्टाइन जहाँ ओछ्यानमा पहिले नै मुख र विद्यार्थीहरू डुबेका थिए। पूर्ण रूपले फैलिएको, म उनलाई के भइरहेको थियो भनेर हेर्न गएँ उनले सुत्ने ठाउँलाई उनी बदलिन्, उनी सास फेर्दै गइरहेकी थिइन र मलाई एक मिनेट पनि लागेन किनभने मैले उनलाई त्यस्तै फेला पारेँ, वास्तवमा मैले भर्खरै ढल्छु। कठिनाइको साथ or वा times पटक सास फेर्नुहोस् र त्यसपछि म दुखाइको रुवामा हिर्काएँ र सास फेर्न छोडिहाल्यो र ऊ त्यहाँ रही
मसँग प्रतिक्रिया दिन समय थिएन किनकि मैले कुनै पनि हिसाबले यो आशा गरेन
जब मैले उनलाई यस्तो दृश्य पाila्ग विद्यार्थीहरूसँग देखेको थिएँ र स्पष्टतः उनीहरूमा केही गडबडी भएको थियो र झोलिएको थियो, मेरो टाउकोमा पहिलो कुरा आयो कि त्यसले तातो स्ट्रोक दिएको थियो, तर किनभने मौसम एकदम राम्रो थियो किनभने त्यहाँ थियो। यो वर्षा भएको थियो, मैले यो विषाक्तता कि भनेर सोचेको छु तर यो असम्भव छ किनभने उसले वर्षौंदेखि नखानिएको नयाँ केहि खान सकेको छैन, वा उसले माकुरोले डसेको भए पनि मैले पनि देखेको छु। एक बिरालालाई मार्न कम्तिमा एउटा विषाक्त
मलाई थाहा छैन उनलाई के हुन सक्थ्यो, म सम्पूर्ण रूपमा आश्चर्यचकित भएको थिएँ र अब म केहि पनि गर्दिनँ तर निरन्तर अर्कोलाई निगरानी गर्दछु र उनी ठीक छ कि भनेर जान्छु।
जस्तो म भन्छु, लक्षणहरू जुन मसँग इन्टर्नेटमा अचानक मृत्युको रूपमा खोजीएको कुनै पनि कुरासँग मेल खाँदैन, यदि पशु चिकित्सक वा केही पढेको छ र ऊ मलाई के भएको छ मलाई बताउन सक्छ भने उसले .. ।
H लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते, मलाई तपाईंको बिरालोलाई के भयो भनेर माफ गर्नुहोस्
हुनसक्छ उसलाई मुटुको समस्या हुन सक्छ, वा परजीवीहरू। कहिलेकाँही, दुर्भाग्यवश, एक मात्र लक्षण यसको परिणाम हो, यस अवस्थामा पशुको मृत्यु। कहिलेकाँही मानिसमा पनि हुन्छ। तिनीहरू ठीक छन्, स्पष्ट रूपमा स्वस्थ छन्, तर एक दिनको कुनै थप विज्ञापन बिना तिनीहरू भूमिमा झर्छन्, निर्जीव। किन? तपाईले भन्न सक्नुहुन्न, बिना शव परीक्षण नगरी, र अझै पनी ... यति सम्म कि कहिलेकाँही रहस्य समाधान नै रहन्छ।
एड्रियन मार्टिन भन्यो
नमस्कार, डिसेम्बर १ on मा, लोला नामको बिरालोको बच्चा मरे।
यो पखाला को साथ शुरू भयो। म उसलाई पशु चिकित्सकमा लगें र मैले उनको गधामा उनको तापक्रम लिएँ, उनले थर्मामीटर घुसाए
र अचानक उनी मरे …… मलाई लाग्छ कि यो खाना नै हो…। मेरी आमा आफ्नो वयस्क खाना सबै किन्नमा किन्न चाहन्थिन् ……… .. डाक्टरले मलाई सस्तो खाना बेचे जुन एउटा दोस्रो ब्राण्डको म अझै पनी विश्वास गर्न सक्दिन months महिना भयो। त्यसैले उहाँ मर्नुभयो
Adrián Martín लाई जवाफ दिनुहोस्
माफ गर्नुहोस्, तर म तिमीलाई मद्दत गर्न सक्दिन, म पशु चिकित्सक होइन।
बिरालाको बच्चा धेरै कमजोर हुन्छन्, र त्यस उमेरमा उनीहरूलाई आंत्रा परजीवीहरूको साथ प्रायः समस्याहरू हुन्छन्, विशेष गरी यदि तिनीहरू सडकमा जन्मेका थिए वा यदि तिनीहरू आवारा बिरालाहरूको लापरवाह अवस्थामा छन्।
जे भए पनि हामी तपाईलाई धेरै प्रोत्साहन पठाउछौं।
लियोनार्ड सान्चेज भन्यो
नमस्ते, शुभ दिन
हामीसँग १ बर्षेको बिराला थियो, ऊ घर थियो, उनको सँधै राम्ररी हेरविचार भइरहेको थियो, हामीले कुनै पनि लक्षणहरू देखेन जुन उहाँ बिरामी छ भन्ने संकेत गर्दछ, अन्तिम केही दिन उसले धेरै सुतेको थियो।
आइतवार मैले सारा दिन निद्रामा बिताए र खानेकुरा बिना नै मैले उनलाई सोमबार पशु चिकित्सकमा लगें र उनलाई ल्युकेमिया पत्ता लागेको थियो, यस्तो देखिन्छ कि उसको रगत एकदम तरल रहेको छ, डाक्टरले मलाई भने कि उनी बिरामी भएकोले सम्भव छ। थोरै थियो। सोही दिन तिनीहरूले उसलाई एन्टिबायोटिक र भिटामिनको साथ इंजेक्शन दिए। यद्यपि उनले मंगलबार सुधार देखाएनन् म उनलाई पशु चिकित्सकमा लगें र उनी मरे।
मैले बुझ्न नसकेको कारण के तिनीहरू यदि कहिल्यै बिरामी थिएनन् भने उनीहरू कसरी यत्तिको अचानक मर्न सक्थे?
तपाईंको ध्यान को लागी धन्यवाद
लियोनार्ड सान्चेजलाई जवाफ दिनुहोस्
हामी तपाईंको बिरालाको घाटाको लागि साह्रै दु: खी छौं। तिनीहरू छोड्दा यो धेरै गाह्रो हुन्छ।
तर यदि यो सत्य हो कि उ सानो थियोदेखि उसलाई ल्यूकेमिया थियो, त्यहाँ बिरालाहरू छन् कि राम्रो देखिन्छन् ... जब सम्म तिनीहरू त्यसो हुन छाड्दैनन्।
एनेट कास्टिलो भन्यो
हामीले १ महिना अघि केही बिरालाहरू लाई दियौं, र उनीहरूले हामीलाई बताए कि तिनीहरु कम तौलका छन्, हामीले उनलाई सन्तुलित सुख्खा र भिजेको खाना किनेका थियौं, उनीहरूले निको पारे तर धेरै भएनन्, उनीहरु wor डोजेर्मिंगका डोज छन् र उनीहरूले समस्यालाई फ्याँक्दैनन्, आइतवार राती एक जना ऊ मेरो कोखबाट उठ्यो र जब उनले महसुस गरे कि ऊ आफ्नो पछाडिको खुट्टाले राम्ररी हिंडिरहेको छैन, उसले तिनीहरूलाई खरायोसरह सार्यो, भोलिपल्ट बिहान हामीले उनलाई भेटमा लग्यौं, तिनीहरूले प्लेटहरू गरे, उनले कुनै प्रस्तुत गरेनन्। चोटपटक, हामी घर फर्क्यौं र अब अगाडिका खुट्टाहरू पनि छैनन् उहाँ तिनीहरूलाई राम्ररी सार्नुभयो, हामी पशु चिकित्सकमा फर्क्यौं, मलाई लाग्छ कि यो न्यूरोलॉजिकल केही हुन सक्छ, तिनीहरूले उसलाई एन्टी-इन्फ्लेमेटरी, र भिटामिन दिए, उहाँ भोकाउनुभएको थियो, यस समयमा उहाँ नराम्रो सास फेर्न थाल्यो, उसले आफ्नो मुख खोले, र आवाज निकालेन, पशु चिकित्सकलाई फिर्ता पठाए, उनीहरूले उनको लागि परीक्षण गरे। एड्स र फिनलिन ल्युकेमियालाई रद्द गर्नुहोस्, अन्तमा तिनीहरूले उनलाई अक्सिजन कक्ष राखे, रात ११ बजे ऊ हृदय रोगले ग्रस्त भयो। मलाई अझै थाहा छैन कि उसलाई के भयो होला, मात्र आज उनीहरूले माईकोप्लाज्मोसिसलाई हटाउन रगत गणना गर्थे। उनी २ 1 घण्टा भन्दा कम समयमा मरे, ऊ मुश्किलले दुई महिना पूरा गरेको थियो। उसको भाइ सामान्य देखिन्छ, तिनीहरूलाई यति थोरै गुमाउनु साँच्चै दर्दनाक छ
एनेट कास्टिलोलाई जवाफ दिनुहोस्
हो, यो धेरै पीडादायी छ। खुशी हुनुहोस्।
आज मेरो प्यारो--वर्षीया रिंगो जीवनको बिस्तरमा उठ्यो, म उसलाई बुझ्दिन कि उहाँ कहिल्यै बिरामी हुनुहुन्न र हिजो सम्म उसको व्यवहार सामान्य थियो, उहाँ आफ्नो ओछ्यानमा उभिनुभयो, आफ्नो खुट्टा अगाडि बढेको थियो, उसको सानो टाउको झुण्डिएको थियो। ओछ्यान र उनको सानो नाक एक सानो snot साथ, यो हामीलाई दुःख र पूर्ण के उसलाई छोडियो के भयो उसलाई।
रिing्गो गुमाएकोमा हामी दु: खी छौं। यो धेरै गाह्रो हुन्छ जब, राम्रोसँग, जब तिनीहरू सदाको लागि निदाउँछन् ...
तर के हुन सक्छ भनेर पत्ता लगाउन हामी पशुचिकित्सकसँग परामर्श सिफारिस गर्छौं, किनकि त्यसले मात्र त्यस प्रश्नको उत्तर भेट्टाउन सक्छ।
केहि अजीब कुरा मेरो pussy दिन अघि मेरो चकट्याटको साथ भयो, ऊ १ and र साढे १ .. वर्षको थियो। रातमा मैले उसलाई उसको दवाव दबाब for बिहान दिई। बिदाई भने, उहाँ सामान्य हुनुहुन्थ्यो र सधैँ, म सुत्न गएँ। .. मेरो बुवा मलाई बिहान3बजे उठ्नुहुन्छ मेरो बिरालाको बच्चा बस्ने कोठाको कार्पेटमा मरे भनेर भनिएको छ, ऊ पहिले नै कठोर मोर्टिसको साथ थियो। मैले करिब दुई महिना अघि सबै परीक्षणहरू गरें र ती राम्रै भए, मैले उनको मुटु, मिर्गौला र कलेजोको अल्ट्रासाउन्ड पनि गरें। उमेर र उच्च रक्तचापको कारणले किडनी असफल भएको थियो र यसले हालैमा उपचार गरिरहेको थियो। यसले मलाई दुःखी बनायो, म यो कहिले पनि बुझ्न सक्दिन कि त्यो अचानक मृत्यु भयो, यो एउटा अस्पष्ट मृत्यु हो। ऊ अर्को महिनामा आफ्नो जिन्जाभिटिसमा काम गर्ने थियो। किनभने ऊ स्पष्ट थियो। म मेरो बच्चाको लागि ज्यादै दुखी छु, मलाई अझै त्यस्तो लाग्दैन
म जान्न चाहान्छु कि मेरो बिरालोको के कारणले मरेको थियो, हामीले उसलाई बल बिना नै निको पार्ने गरी भेट्टायौं जस्तो कि उनी बेहोश भएकी थिईन्, मेरी सानी बहिनीले उनलाई अँगालो हालिन् तर केहि समय पछि उनी फोहोरी भए र केहि मिनेटमै उनी मरेकी थिइन्, कसैले मलाई भन्न सक्छ उसलाई भयो
Zeydi लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, मेरो ३ महिनाको बिरालो र थोरै अचानक मरेको छ।
शुक्रबार हामी पशु चिकित्सक मा गयौं र उनीहरुले उनलाई दोस्रो trivalent खोप संग खोप लगाए, आज बिहान र दिउँसो उनी ठीक थिए, र केहि घण्टा पहिले हामी घर गए बिरालाको बच्चा कडा थियो ...
हामीलाई थाहा छैन के हुन सक्छ, हामी यो हो कि हामी यो विश्वास गर्दैनौं।
के कसैलाई थाहा छ उहाँलाई के हुन सक्छ?
म मार्कोस, 52 वर्ष को हुँ। यो धेरै उपयोगी योगदान धेरै ध्यान दिएर पढ्दै, मैले निम्न निष्कर्ष निकालेको छु: अनुभव बाट, घरपालुवा जनावरहरु को पर्याप्त अज्ञानता भएको र जब तपाइँ बिरालोको बच्चा को एक प्रशंसक हुनुहुन्छ, तर हामी पनि एक अपनाउन को लागी इच्छुक छौं, हामी तुरुन्तै बिल्ली स्वास्थ्य को सबै मामिलाहरु लाई विचार गर्न को लागी छ। उनीहरु वा फरक थिए। बिरालोको स्वास्थ्य प्राथमिक चिन्ताको विषय हो। अझ धेरै यदि यो सानो छ, यो स्तन को दूध बाट हटाईएको थियो। केन्द्रीय विषय "कीटाणुशोधन" हो, जुनसुकै यसको मूल राज्य। यो बिल्ली का बच्चा को जीवन को रक्षा को लागी सावधानी को उपाय हो। यो एक उच्च प्रतिशत, पीडादायी भावनात्मक तस्वीरहरु लाई जीवन को यस्तो महान र साँचो साथीहरु को हानि को कारण बाट बच्न हुनेछ।
Marcosmx लाई जवाफ दिनुहोस्
त्यो हो: deworming बिरालाहरु एक धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो, जो जनावर को जीवन भर मा गरिनु पर्छ, चाहे यो हो वा घर छोडेर।
नमस्कार, हामीसंग तीन बिरालाहरु थिए, पहिलो हामीले सडक बाट लिएका थियौं, उनी बिरामी थिइन् र अचानक हामीले उनको आधा मृत भेट्यौं, र हामी उनलाई पशु अस्पतालमा लग्यौं र उनीहरुलाई थाहा थिएन कि कसरी हामीलाई कुनै स्पष्टीकरण दिने, दुई पटक सम्म। अन्ततः उनी मरे। अन्य दुई हामी एक कथित स्वस्थ लिटर बाट लिईयो। उनीहरु मध्ये एक भोलिपल्ट भक्कानिए र हामीले उनलाई अस्पताल लैजानु पर्यो किनकि उनी आधा मरेकी थिइन्। जब सम्म अचानक उही कुरा मरे। यी लक्षणहरु थिए जस्तै हिड्ने बेला गरीरहनु, गरीब भूख लाग्नु, र उनीहरु धेरै सुते। तर अन्तिम एक स्वस्थ थिईन्, उनी खेलीन्, खाईन्, यहाँ बाट त्यहाँ सम्म भागे, हिजो सम्म म घर पुगें र उनको कहीं बाहिर मृत भेटिए। मैले कुनै लक्षणहरु प्रस्तुत गरेको छैन र म छोड्नु भन्दा पहिले म सधैं जस्तै उस्तै थिएँ। उनीहरु सबै एक महिना र एक आधा थिए र एउटै कुरा उनीहरु सबै संग भएको छ। र कसैले हामीलाई कुनै जवाफ दिएनन्।
हामी के भयो को लागी क्षमाप्रार्थी छौं, तर हामी पशु चिकित्सक छैनौं।
हुनसक्छ उनीहरु पिए वा केहि नराम्रो खाए, वा परजीवीहरु थिए। मलाई थाहा छैन।
त्यस्तै गरी, धेरै प्रोत्साहन।
हिजो मेरो प्यारी बीन बिल्ली का बच्चा मर्नु भन्दा पहिले, उनी पूर्ण रूपमा स्वस्थ थिइन्, उनी घर भित्र एक्लै बस्छिन्, उनी स्वस्थ खाईन्, उनी सफा थिइन्, मैले उनलाई ५ मिनेट अघि देखे र उनी पूर्णतया सामान्य थिइन्, म बाथरूममा गएँ र सधैं जस्तै सीढीहरु मुनि, यो २ मिनेट भन्दा बढि लागेन र जब म बाथरूम को ढोका खोल्छु उनी भुइँमा सास फेरीरहेकी थिईन्, पिटेकी थिईन्, उनी मरे र म उनको लागी केहि गर्न सकिन, मलाई लाग्यो कि उनीहरुले मेरो आयाम परिवर्तन गरे, म अझै गर्न सक्छु ' थाहा छैन के भयो ... यो धेरै पीडादायी छ!
माधवी लाई जवाफ
यो धेरै, धेरै पीडा छ एक मायालु एक गुमाउन को लागी ... म मात्र तपाइँलाई प्रोत्साहन को एक धेरै पठाउन सक्छु।
र मलाई थाहा छैन यदि यसले तपाइँलाई मद्दत गर्दछ, तर केहि बर्ष पहिले जब मेरो बिरालाहरु मध्ये एक को मृत्यु भयो (एक यातायात दुर्घटना को कारण) म उसको फोटो लिए, एक कुर्सी मा बसे, मेरो आँखा बन्द गरें र मेरो फोटो मा। मुटु मैले उसलाई सबै कुरा भनिदिएँ। यो मेरो जीवनमा कहिल्यै गरेको सबैभन्दा गाह्रो चीज थियो, तर एकै समयमा एक जसले मलाई सबैभन्दा धेरै सेवा गर्यो। सायद यसले तपाइँलाई पनि मद्दत गर्दछ।
मैले जून १५ मा २ बिरालाहरु लाई बचाए र बच्चा हिजो मरे र बच्चा हिजो मरे। दुबै स्वस्थ र कीटाणुनाशित थिए, यो हप्ता अब यो पशु चिकित्सक को लागी उनीहरुको पालो थियो। बच्चाको साथ म उसको अन्तिम सास देख्न सक्थे। किनभने उनीहरु बच्चा संग सुतिरहेका थिए र जब म उनीहरुलाई सुत्न छोडेको ३० मिनेट पछि उनीहरुलाई जाँच गर्न गएँ यो पहिले नै चिसो र पतला विद्यार्थीहरु थिए। बच्चा त्यो थियो कि उनी एक पल को लागी छोडे जब उनी आइपुगे मैले उनलाई सुतेको देखे र मैले उनलाई सीपीआर दिने कोशिश गरेँ किनकि उनी थोरै पल्स महसुस गर्थे तर सास फेर्न सकेनन्। जब मैले उसलाई सीपीआर दिएँ उसले खानाको गन्ध आएर उसको अन्तिम सास लिए र मैले अब पल्स महसुस गरेन। म ५ मिनेट वा अलि बढी को लागी जारी राखे तर केहि पनि उसको आँखा बन्द गरेन र उसको अन्तिम आँसु जारी।
उनीहरुसँग लगभग १ महिना र २ हप्ता मात्र थियो।
उफ, कति दुखी। धेरै प्रोत्साहन पाओला। कम से कम, उनीहरुलाई घर को स्नेह र गर्मी थाहा थियो, र त्यो आफै मा धेरै सकारात्मक छ।
मेरो बिरालोको बच्चाको पनि मृत्यु भयो, तर मसँग अनौठो लक्षण छ, त्यो हो, उनी "सामान्य स्थिति" मा जन्मेकी थिइन् र त्यो हो जब सम्म उनी आफ्ना भाइबहिनीहरु संग स्तनपान गर्न छोडेनन्, अचानक उनी "पक्षाघात भएको पीठ" संग देखा परे वा दुबै हिन्दु खुट्टा प्रयोग गर्न सकेनन् । र एउटा पुच्छर, त्यसैले उसलाई शौच गर्न र सफा गर्नमा समस्या भयो, मात्र एक दिन उसले भर्खरै खाना खान छोड्यो र बिहान मैले उसलाई मृत र पसीना बगाएको पाए। यो अजीब छ एक महिना मा के भयो, पनी महसुस नगरीकन जब सबै परिवर्तनहरु भइरहेका थिए। अन्यथा, यो एक बिरालोको बच्चा हो कि घर मा रहन्छ, घर भित्र छैन।
हारुनलाई जवाफ दिनुहोस्
म बिल्कुलै भत्किएको छु किनकि हिजो मैले एउटा बिरालो कोलोनी बाट एउटा बिरालोको बच्चा (मैले उसलाई मन्डरिना भनिन्) गाड्न पर्यो कि म मेरो शहरीकरण मा ध्यान दिन्छु।
अघिल्लो रात एकदम सही थियो, म संग खेल्दै र सधैं जस्तै वरिपरि दौड, साथ साथै खाना जस्तै मँ गर्न को लागी।
तर दिउँसो म किन्न को लागी बाहिर गएँ र जब म कार बाट बाहिर निस्कें मैले उसलाई फुटपाथ मा कडा देखे। उनी मात्र ३-४ महिनाकी थिइन् र फुर्तीलाग्दो र जीवन भरि थिइन्। उनलाई कुनै चोट लागेको थिएन।
यो मूर्ख लाग्नेछ किनकी उनी मसंग बस्दैनन्, तर समय छ कि जब म उसलाई खाना राखेर उसको हेरचाह गर्छु, म उसलाई धेरै मन पराउँछु र म रोउन मद्दत गर्न सक्दिन। सबैभन्दा गाह्रो कुरा यो हो कि मलाई थाहा छैन के भयो। मँ मात्र सोच्न चाहन्छु कि कम से कम यो एक अचानक मृत्यु थियो र गरीब चीज लाई यसको बारे मा थाहा थिएन।
धेरै माफ गर्नुहोस्। उत्साहित हुनुहोस्।
बिरालालाई कसरी निन्दा गर्ने?
के तपाई बिरालाको कपाल काट्न सक्नुहुन्छ?